Hermes Inotangisa Nhasi Nyowani Yekusarudzika Tambo yeApple Watch | Ndinobva mac
Zvekare vakomana kubva kuCupertino vanoenderera mberi kubheja pane dhizaini yakasimba Hermes, kupedzisa yakafara assortment yemabhande anowanikwa eApple Watch. Parizvino Hermes inowanikwa kubva kunhamba zhinji yemakadhi, mabhanhire atinogona kutenga takazvimiririra kana pamwe neApple Watch. Asi kune ino nhamba yemabhande, nhasi Mbudzi 24 tambo nyowani yakawedzerwa, iyo inongowanikwa munzvimbo dzakasarudzwa dzeApple Stores kuwedzera kune ezvitoro zvepamusoro izvo Apple anazvo mune dzimwe nyika dzeEurope seParis neUnited Kingdom. Chaizvoizvo izvi yekupedzisira ichavhara masuo ayo pakutanga kwegore iyo inouya nekuda kwekutengesa kushoma kweichi chigadzirwa uye zvishandiso zvacho.
Iyi tambo nyowani inonzi Equateur Tatoutage, yakagadzirwa naRobert Dallet, uye ichaburitswa muhuwandu hwakaganhurwa hwezvikwata, sekugona kwatakaita kuverenga muchinyorwa Vogue, uyo akataura izvi zvinotevera mubatsiri weApple Watch. Iyi tambo nyowani yakavakirwa pane Imwe Yekushanya modhi iyo yatovepo muApp Store asi ne musoro wesango uko kwatinoona jaguar.
Tambo iyi ichave iripo kwemakumi mana nemakumi mana emadhora, 70 euros kupfuura iyo Imwe Yekushanya modhi, ichiita iyo inodhura kwazvo Hermès tambo iyo Apple iri kutengesa sechinhu chinowanikwa neApple Watch. Tambo dzese dzaHermès dzinogona kutengwa zvakazvimiririra, dzakanakira vese vashandisi vanotova neApple Watch uye havadi kutenga mudziyo zvakare kuti vakwanise kunakidzwa nemabhande aya akasarudzika.
Asi kana iwe uchifunga kutenga chero eaya matambo neApple Watch, iwe unofanirwa kuziva izvo aya mamodheru anotipa yakasarudzika yekutarisa Akafuridzirwa neyakagadzirwa dhizaini yeiyo French femu wachi, wachi yekutarisa yatisingakwanise kuwana mune chero imwe Apple Watch modhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Hermes nhasi inotangisa nyowani yakasarudzika tambo yeApple Watch